Isuduwe: 51°30′26″N 00°07′39″W﻿ / ﻿51.50722°N 0.12750°W﻿ / 51.50722; -0.12750
London waa caasimada dalka Midowga boqortooyada Britanwaana magaalada uguwayn wadankaas. Waxa ay kutaalaa amaba dhexmara Wabiga Thames. Waxa ay kutaalaa koofurta Ingiriiska. Waxaa kunool dad gaadhaya ilaa 7.5 milyan oo qof. Marka lagudaro dadka hareeraha London kunool waxa ay tirado noqonayasaa ilaa 12,599,561 oo qof. Waa magaalda uguwayn midawga yurub, waana mid kamida goobaha ugu muhiimsan syaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan caalmaka. Waxa kuyaala magaalada jaamcado iyo guryo dhaqameedyo, masraxyaal iyo goobo dhaqan oo aad u waawayn. Waxaa xafiisyo kuleh ururo badan oo caalami ah.
London, oo loo yaqaan 'Greater London', waa mid ka mid ah sagaal gobol oo England ah iyo qaybta ugu sareysa ee ka soo jeeda magaalooyinka waawayn ee magaalada. [Note 5] Dhismaha magaaladuna korortay, Shirkadda London waxay diidday inay isku daydo inay isku duubnto magaalada iyo xaafaddeeda, taas oo keenaysa "London" in lagu qeexo dhowr siyaabood oo ujeedooyin kala duwan.  Boqolkiiba afar of Greater London waxaa daboolay magaalada post ee London, halkaas oo 'LONDON' ka mid tahay cinwaanada boostada.  Qadka taleefanka taleefanka ee London (020) wuxuu daboolayaa aag ballaaran, oo la mid ah cabbirka weyn ee London, inkastoo qaar ka mid ah degmooyinka kale laga saaray iyo meelaha qaarkood dibedda dibedda ayaa lagu daray. Xuduudda London ee Weyn ayaa la jaanqaaday waddada M25 ee meelaha.  Kordhinta magaalooyinka ee hadda dibadda waxa ka hortagaya Metropolitan Green Bottle,  inkastoo dhismaha la dhisay uu ka baxsan yahay xudduudaha meelaha, taas oo keentay in si gaar ah loo qeexay Deegaanka Great London London. Intaas ka bacdi waa suunka baaxadda weyn ee London.  Greater London wuxuu ujeedaa ujeedooyin u dhaxeeya gudaha gudaha London London iyo London. Magaaladu waxay u kala qaybsantay Webiga Thames ilaa Waqooyiga iyo Koonfurta, iyada oo ay ku taal bartamaha London aan caadi ahayn gudaha gudaha. Isku-duwaha Xarunta Magaca ee London, Caadi ahaan waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay Eleanor Cross ee Charing Cross meel u dhow Isgaadhsiinta Trafalgar iyo Whitehall, waxay kudhowaad yihiin 51 ° 30'26 "N 00 ° 07'39" W.  Si kastaba ha ahaatee xarunta juqraafiga ah ee London, hal qeexid, wuxuu ku yaalaa London Telefoon Lambeth, oo kaliya illaa 0,1 mayl waqooyi-bari waqooyiga tuubada Waqooyiga Lambeth. 
Dhismayaasha London waa mid aad u kala duwan si ay u muujiyaan qaab gaar ah oo qaab dhismeedka ah, qayb ahaan sababtoo ah da'dooda kala duwan. Guryo badan oo waawayn iyo dhismayaal dadweyne, sida Galbeedka Qaranka, ayaa laga dhisay dhagax dhagax ah. Meelaha qaarkood ee magaalada, gaar ahaan kuwa ku yaal galbeedka bartamaha, waxaa lagu gartaa dhismo cad ama dhismo cadaan ah. Qaab dhismeed kooban oo ku yaalla bartamaha London ka hor taariikhda weyn ee Dabka 1666, kuwaas oo ah raadsasho yar oo Roomaan ah, Tower of London iyo dhowr ka mid ah dadkii ka badbaaday Tudor ee magaalada. Dheeraadka dheeraadka ah, tusaale ahaan, Tudor-period Palace Court Palace, England ee ugu da'da weyn ee Tudor oo ka badbaaday, oo uu dhisay Cardinal Thomas Wolsey c.1515. Kaniisadaha qarniga 17-aad ee Wren, hay'adaha maaliyadeed ee aan caadiga ahayn sida Royal Exchange iyo Bank of England, illaa horraantii qarnigii 20aad ee Old Bailey iyo 1960s-kii Barbican Estate-ka ee qayb ka mid ah hidaha kala duwan ee dhismaha.
Maqaal dhamaystiran: Demography of London
White British (34.9%)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=London&oldid=186292"